Akhriso Weerar Askar Badan Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Dalka Tuunis. – Bogga Calamada.com
Akhriso Weerar Askar Badan Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Dalka Tuunis.
Weerarkan oo ahaa mid Kamiin ah waxaa loo dhigay ciidamo ka tirsan Xukuumada Tuunis kuwaasi oo ku Roondeynayay deegaan ka tirsan gobalka Janduubah oo dhaca Waqooy Galbeed ee dalka Tuunis.
Weerarka Dhabba galka ah ayaa lagu daah furay Labo qarax oo ah noocyada Miinooyinka dhulka lagu aasa ah kuwaasi oo lagu burburiyay Labadii gaari ee ay wateen ciidamada la beegsaday kadibna waxaa xigay weerar toos ah.
Deegaanka sida gaarka ah Kamiinka kaga dhacay ayaa lagu magacaabaa Ceynu Suldaan kaasi oo u dhaw xad beenaadka ay wadaagaan dalalka Tuunis iyo Al-jazaa’ir,iyadoona ciidanka la beegsaday ay ka tirsanyihiin kuwa ilaalinta Xuduudaha.
Inta la xaqiijiyay Weerarkan qorsheysan waxaa lagu dilay Sagaal askari oo ka tirsan xukuumada Ridada Tuunis kuwaasi uu ku jira sarkaal Hal Xidigle ah,sidoo kalane waxaa lagu dhaawacay askari kaasi oo la sheegay inuu dhaawaciisa culus yahay.
Afhayeenka Wazaarada Arimaha Gudaha Xukuumada Tuunis oo la hadlay warbaahinta ayaa qiray inuu jira weerarka islamarkaana khasaara culus lagu gaarsiiyay ciidamada Ilaalinta Xuduudaha ee Xukuumada Ridada Tuunis.
Mas’uuliyadda weerarkan lagu dilay askarta ka tirsan Xukuumada daba dhilifka Tuunis waxaa sheegtay Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Bilaadul Magribil Islaam,kadib Bayaan ay baahisay Mu’sassada Al-andalus oo ah garabka Warbaahineed ee Mujaahidiinta Al-qaacidah Faraca Bilaadul Magribil Islaam.
Bayaanka ayaa lagu xusay in weerarkan qorsheysan ay fulisay Katiibada Cuqbah Binu Naafic islamarkaana uu u dhacay sidii loo qorsheeyay laguna dilay sagaal askari uu sarkaal ku jira,hal askarina si xun loogu dhaawacay.
Sidoo kale Qoraalka ayaa lagu xusay in Ciidamada Mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen oo ay qaniimeysteen hub iyo agab milliteri oo muhiim ah kuwaasi oo isugu jira 8 qori oo AK47 ah, bastoolad iyo qori Dhashiike ah,mana jirta wax shuhada iyo dhaawac ah oo soo gaartay ciidamada Mujaahidiinta ee fuliyay weerarkan qorsheysan.
Mujaahidiinta Katiibada Cuqbah Binu Naafic oo ka tirsan Mujaahidiinta Al-qaacidah ee Bilaadul Magribil Islaam ayaa ka howlgala dalka Tuunis waxeyna dhowr jeer gudaha dalkaasi ku fuliyeen weeraro qorsheysan oo ay ku dileen saraakiil,askar iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumada Ridada Tuunis.
Halkan Hoose Ka Akhriso Bayaanka Mujaahidiinta Al-qaacidah Ee Bilaadul Magribil Islam.